यी हुन् बलिउडले असमयमै गुमाएका पाँच अभिनेत्री::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
यी हुन् बलिउडले असमयमै गुमाएका पाँच अभिनेत्री
काठमाडौं- भारतीय चलचित्र जगतकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको अचानक भएको मृत्युबाट विश्वका कलाप्रेमीहरु यतिखेर स्तब्ध छन् । बलिउडकी यी बहुचर्चित नायिका श्रीदेवीको गत फेब्रुअरी २४ को राति अचानक मृत्यु भएको खबरले भारतीय चलचित्र जगत मात्र होइन उनलाई मन पराउने दक्षिण एसियाली क्षेत्रका धरै देशका नागरिकले आफ्नो प्रिय कलाकार र रुपकी रानी गुमाएको महसुश गरेका छन् ।
सन् १९६३ को अगष्ट १३ मा भारतको तमिलनाडुमा जन्मिएकी श्रीदेवी चार वर्षको उमेरदेखि कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन् । ५४ वर्षको उमेरमा निधन भएकी उनले ५० वर्ष त फिल्म क्षेत्रमै काम गरिन् । उनको मिस्टर इण्डिया, चाँदनी, मावली, तोफा, चालबाज, लमहे, खुदा गवाह, सद्मा, जुदाईजस्ता निकै चर्चित तथा व्यावसायिक रुपमा सफल चलचित्र छन् । उनले यति छोटो उमेरमै डेढ सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् ।
२. परवीन बाँबी
यसैगरी अचानक मृत्यु भएकी भारतीय चलचित्रका अर्की अभिनेत्री हुन्नुहन्छ परवीन बाँबी । सन् १९८० को दशकमा अमर अक्बर एन्थोनी, नमक हलाल र शान जस्तो बलिउडका प्रख्यात चलचित्रमा नाम कमाउन सफल उनी सन् १९४९ मा भारतको गुजरात राज्यमा जन्मिएकी थिइन् । बाँबीको सन् २००५ को २० जुलाईका मुम्बइस्थित आफ्नै घरमा ५५ वर्षको उमेरका सुतेकै अवस्था मृत्यु भएको थियो । यो पनि अर्काे एक रहस्यमय निधन नै थियो । बाँबी १९७३ देखि १९९० सम्म अभिनेत्रीको रुपमा चर्चित थिइन् । अविबाहित बाँबीले चलचित्र छायाङ्कनमा बढीजसो अभिताभ बच्चन र शशिकपूरसँग अभिनय गरेकी थिइन् ।
३. दिब्या भारती
यस्तै रहस्यमय मृत्युवरण गरेकी अर्की अभिनेत्री हुनुहुन्थ्यो दिब्या भारती । रुपमा अब्बल मानिएका र रुपको चर्चामा शिखरमा रहेकी यी अभिनेत्रीको १९ वर्षको उमेरमा नै मृत्यु भएको थियो । सन् १९७४ फेबु्रअरी २५ मा महाराष्ट्रमा जन्मिएकी उनको सन् १९९३ अप्रिल ५ मा मृत्यु भएको थियो । हिन्दी र तलेगु चलचित्रमा सानै उमेरमा सफलता प्राप्त गरेकी दिब्याले सन् १९९० को सुरुमा नै सफलता प्राप्त गरेकी थिइन् । कम समयमा नै सफलताको चुचुरोमा पुग्न सफल दिब्याले बिश्वात्मा, सोला ओर सबनम र दिवानाजस्ता चलचित्रबाट भारत मात्र नभएर भारत बाहिरका कैयौँ आत्मालाई दिवाना बनाउन सफल भएकी थिइन् । यी नायिकाको मुम्बइस्थित एक अपार्टमेन्टको कौसीबाट खसेर मृत्यु भएको भनिएको थियो । तर यो हत्या थियो भन्ने विवाद पनि नचलेको होइन । आजसम्म पनि उनको मृत्यु रहस्यकै गर्वमा छ भनिन्छ ।
४. स्मिता पाटिल
बलिउड जगतले अचानक र कम उमेरमा गुमाउन पुगेको अर्को अभिनेत्री स्मिता पाटिल पनि हुन् । एक दशकमा हिन्दी र मराठी ८० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी यी अभिनेत्रीको ३१ वर्षको उमेरमा नै मृत्यु भएको थियो । सन् १९५५ को अक्टोबर १७ मा जन्मिएकी पाटिलको १९८६ को १३ डिसेम्बरमा मृत्यु भएको थियो । उनले दुई वटा राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार पाउएकी थिइन् । भारतीय नागरिकलाई दिइने चौथो उच्चस्तरीय पुरस्कार पदमश्री समेत पाटिलले प्राप्त गरेकी थिइन् । भारतीय चलचित्रका अभिनेता राज बबरसँग विबाह सम्बन्धमा बाँधिएकी स्मिताको बच्चा जन्मिदा उत्पन्न प्रसुतीजन्य जटिलताका कारण मृत्यु भएको थियो । उनले हिन्दी भाषाका प्रख्यात चलचित्र अर्थ, भूमिका, वासिस, आजकी आवाज, मिर्च मसाला, नमक हलालजस्ता कैयौ चलचित्रमा अभिनय अभिनय गरेकी थिइन् ।
५. मीना कुमारी
हलिउड चलचित्र जगतले सानै उमेरमा गुमाएको अर्का अभिनेत्री मीना कुमारी । सन् १९३३ को १ अगस्तमा जन्मिनु भएका मिनाकुमारीको ३९ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो । बालकलाकारबाट नै चलचित्र जगतमा प्रवेश गर्नु भएका मिनाको १९७२ को ३१ अगस्तमा मृत्यु भएको थियो । उनलाई बलिउड जगतमा ‘द ट्रेजिडी क्वीन’ को नामबाट पनि चिनिन्थ्यो । उनले बलिउडका प्रख्यात चलचित्र सहिब बिवी ओर गुलाम, पाकिजा, मेरे अफ्ने, बैजु बावरा, दिल अप्ने और प्रित पराई जस्ता कैयौँ चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन् । उनको निधन क्यान्सरको कारण भएको थियो ।